हर्कबहादुर : एक सुलभ र कुशलकर्मीको अन्त्य (संस्मरण) – Chitwan Post
हर्कबहादुर : एक सुलभ र कुशलकर्मीको अन्त्य (संस्मरण)
परेलाहरु खुला भए पनि शरीरले आराम गरिरहेको अवस्थामा रामकृष्ण भाइको फोन आयो– दाइ दाइ, होई भनेर उत्तर फर्काएपछि उसले एउटा दुःखद सन्देश सुनायो– ‘हर्कबहादुर बितेछन् ।’
हर्कबहादुर घर्ती– अलैँचे, लमजुङमा दुई सालमा जन्मिएका, रन्धोज–सेती घर्तीका जेठा छोरा, पच्चीस सालतिर चितवन झरेका, बाल्यावस्थामा दोख (टाइफाइड) भएर श्रवण र वाकशक्ति गुमाएका भूमिहीन श्रमजीवी ।
उनी मेरा दामल, बालमित्र थिए । उनका बाउबाजेले मेरा बाउबाजेलाई कृषि कार्यमा सहयोग गरेका थिए । हर्क पनि त्यो सहयोगको शृङ्खलामा उनिएका थिए । रन्धोज घर्तीको ढिँडोभातको थालमा हर्क र मेरा हातहरु लटारिएका हिजोअस्ति होकि जस्तो झझल्को आउँछ । पहाडघरको कुरा, हर्क कहिले मेरो कहिले रामकृष्णको जग्गाको छेउमा झुप्रो बनाएर बस्थे र हाम्रो कृषि कार्यमा साथ दिन्थे ।
पछि शाखा नहरको किनारको जमिनमा झुप्रो बनाई बसेर चम्पानगर–पृथ्वीनगर र सेरोफेरोका गाउँघरका मानिसहरुका घरधन्सारहरु बनाउने ज्यामी काममा लाग्न थाले । यो कामले उनलाई कुशल सिकर्मी बनायो । उनी डकर्मी पनि बने । उनी एक कुशल र सिद्घहस्त कर्मी बने ।
चितवन घरको कथा, बरण्डाभार बनदेखि काठे गाडामा घरधन्सार बनाउने बडेमा–बडेमाका काठ ल्याउन सक्ने बल बर्कत भएका हर्क छिटो र सुलभरुपमा काम गर्ने शैली भएका ज्यामी भएकोले यस भेगका किसानहरु उनीद्वारा काम लिन्थे । गरिब र भुमिहीन भए पनि उनी अत्यन्त मेहनती थिए र इमानदार भएकाले एउटा लोकप्रिय कर्मी बनेका थिए । हिजोको तीस–चालीसकै दशकतिर उनले उभ्याएका घरधन्सार, गोठ–कटेरा, टौवा चम्पानगर, पृथ्वीनगर र सेरोफेरोमा व्याप्त थिए । हर्कका प्रतीक ती संरचनाहरुमा उनको कला र कर्म बोल्थ्यो । आज तिनलाई पक्की र सुन्दर, भव्य र नव्य घरहरुले विस्थापित गरेका छन् । तिनको भग्नावशेष पनि पाइँदैन । तर, उनका हात तथा सीपद्वारा निर्मित कुर्सी, टेबल, बेन्च, स्टुल, दराज, खाट आदि फर्निचरहरु भने कसैकसैका घर–पिँढीहरुमा प्रयोगमा आइरहेका छन् ।
गाउँका बाटाका हर्कका पदचिन्हहरु ग्राभेल र पिच बाटोमुनि पुरिइसकेका छन्, तापनि तिनका आवाजहरु बाहिर प्रतिध्वनित भइरहेका छन् । उनका काष्ठकला र वस्त्रचिन्हहरु देख्न गैँडाकोट, कांग्रेसचोकपछाडिको शिवचोक पुग्नुपर्छ । तर, उनलाई त्यहाँ भेट्न सकिन्न । उनी गत असार २५ गते मोटरसाइकलको ठक्करले घाइते भएर साउन ७ गते दिवङ्गत भइसके ।
पत्नी मङ्गलादेवीलाई गुमाइसकेका विधुर हर्क कान्छो छोरा सुरेश र बुहारीको राम्रो पालनपोषण र हेरचाहमा जीवनयापन गरिरहेका थिए ।
मेरा दर्जनौँ विद्वान्, साक्षर, सामान्य, धनाढ्य अनेकस्तरका साथीबीचका हर्क एक निरक्षर र विपन्न साथी हुन्, दामल हुन् । उनी जतिजति खुला र आत्मीयतापूर्वक मलाई ‘मेरो भाइ’ भन्थे म त्यति नै निसङ्कोच र आदरपूर्वक ‘मेरा दाइ’ भन्थेँ । म हिमालय माविको हेडसर छँदा उनी यहाँको ठूलोमान्छे मेरो भाइ हो भन्थे र सरासर मेरो कार्यकक्षमा आई बस्थे । जति व्यस्तताको समय भए पनि म अलिकति समय निकालेर उनीसँग कुराकानी गरी जय गिरीलाई चियापान गराई पठाऊ भनेर बिदाबारी गर्थें । हर्क मेरो भरतपुरस्थित मुनाचोकको घरमा पनि रात बस्ने गरेर धेरैचोटि आएका छन् । मैले उनलाई सधैँ मित्रधर्म पूरा गरी सन्तुष्ट गराएको छु । अब म हर्कलाई कहाँ पाऊँ ? अरु मलामीका साथ यही साउनमा उनको मलामी गएर उनको पार्थिव देहलाई दहन गरेँ । प्रेमभावका साथ उनको मलाम आउने त्यति धेरै मलामी भाइहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु ।
हर्कसित रामकृष्णको पनि करिब–करिब मेरो जत्तिकै प्रेम र हिमचिम थियो । म भेट भएपछि उनी प्रेमविभोर भएर हाँस्थे । उनलाई मैले बढी प्रचलनका दुई–चारवटा शब्द सिकाएको छु, जस्तो नारायणघाट र वीरगन्ज । उनी पहिलोलाई ‘नाघाट’ र दोस्रोलाई ‘विगन’ भन्थे । उच्चारण प्रस्ट नभएर पनि मानिसहरु बुभ्mथे । ‘नाघाट’ भन्न जानेपछि उनले ‘बजार’ भन्न छोडे ।
हर्क धेरै पियक्कड थिए । कर्मी काम गरेर कमाएको पैसामध्ये करिब चौथाइ भाग पिउन खर्च गर्थे । पैसा बैंकमा जम्मा गर्दै गए बूढो हुँदा काम दिन्छ भनेर सम्झाउँदा उनले जम्मा गर्न मान्दै मानेनन् । पत्नी र उनीबीचमा यही पैसाको मामलामा धेरै विवाद पथ्र्यो । म र रामकृष्णले भनेका धेरै कुरा उनी मान्थे, तर पिउन कम गर भन्दा उनी मसित पनि झोक्किन्थे । मानिस सबै सर्वगुणसम्पन्न कहाँ हुन्छन् र ! यही सत्य सम्झिएर उनलाई सम्झाउन नसक्ता म चित्त बुझाउँथे ।
हर्कलाई मानिसहरुले ‘हर्के लाटो’, ‘हर्के झल्ला’, ‘हर्के बहिरो’ आदि जे–जे उपनामले पुकारे पनि उनी कालिगढ हर्कबहादुर र श्रमजीवी हर्कबहादुर हुन् ।
सँगै काम गर्दाको बेला मैले काम बिगार्दा उनका धेरै लपेटा र गाली पाएको छु । तर, म उनीदेखि किञ्चित, कहिल्यै दुःखित भइनँ । मैले तिनलई शिक्षाको रुपमा लिएँ ।
यति इमानदार र कुशल कालिगड हर्कबहादुर घर्ती, यति धेरै मानिसहरुका प्रिय ज्यामी हर्कबहादुर घर्तीले न कहिल्यै कहीँकतैबाट चुत्थो दोसल्ला ओढ्न पाए, न त कोही कुनैबाट एक थुँगा पूmल र एकचिम्टी अबिर लिन पाए । दोसल्ला, पूmल, माला र अबिरहरुको खेती मौलाएको आधुनिक खेतमा हर्कका लागि भनेर सिरू, गन्धे केही पनि उम्रिएन ।
उनको कालिगडीको कुशलता, त्यसको घरघरमा सुलभता कसैले पनि देखेन । उनले बलियाबाङ्गाहरुलाई देखाउँदै पनि हिँडेनन् । लुलालङ्गडाहरुको घैँटोमा घाम पनि लागेनन् । हर्क निर्मित मालहरु अनमोलका भए पनि स्वयम् हर्क एक कौडीका पनि भएनन्, कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि !
हर्कबहादुर घर्तीले मरणोपरान्त ‘जीवनको कौशल’ को मोल पाउलान् ? बलियाबाङ्गाहरुको दृष्टि उनका सीप र सिर्जनामा नपरे पनि लुलालङ्गडाहरुको दृष्टि त्यहाँ पर्ला ?